Jaamacadda DePauw waxay raadisaa Booqashada Kaaliyaha Professor ee Waxbarashada iyadoo diiradda saareysa daraasadaha nabadda iyo colaadaha - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Taariikh furan: Mar 15, 2022
Waaxda Daraasaadka Waxbarashada (EDUC) iyo Barnaamijka Barashada Nabadda iyo Khilaafaadka (PACS) ee Jaamacadda DePauw ku casuunta codsadayaasha jago hal sano ah oo ah darajada Caawinta Professor si ay u bilaabaan Ogosto 2022. Ph.D. Waxbarashada Waxbarashada ama goobaha la xidhiidha iyadoo diiradda la saarayo daraasadaha nabadda iyo colaadaha wakhtiga ballanta. Ballanqaadka ah in wax lagu baro ardayda shahaadada koowaad leh ee goobta fanka liberaaliga ah iyo caddaynta waxbarid wax ku ool ah oo loo dhan yahay waa lama huraan. Waaxdu waxay si gaar ah u raadisaa musharixiinta inay baraan Aasaaska Waxbarashada iyo kuwa la doortay ee Daraasaadka Waxbarashada iyo Nabadda iyo Cilmi-baarista Khilaafaadka ee wax ka qabta daraasadaha nabadda iyo caddaaladda ee muhiimka ah ee waxbarashada iyo doorka waxbarashada iyo isbeddelka bulshada ee dhaqdhaqaaqa nabadda. Koorasyadu waxay sahmin karaan su'aalaha rabshadaha iyo rabshad la'aanta, iska caabinta, dhisidda dhaqdhaqaaqa, barakaca iyo iskahorimaadka, khibradda, iyo barbaarinta iyada oo loo marayo muraayadaha is-goysyada, muhiimka ah, iyo kuwa caalamiga ah. Koorasyada doorashada ee khuseeya waxa kale oo laga yaabaa in lagu daro barnaamijyo kale oo isku dhafan.
Meelaynta waxbaridda waa saddex koorso xilli-dugsiyeedkii. Murashaxa guuleysta wuxuu bari doonaa liiska EDUC/PACS xulashooyinka ku saleysan cilmi baarista musharaxa iyo koorsooyinka asaasiga ah ee Daraasaadka Waxbarashada. Maalgelinta ayaa loo heli karaa horumarinta xirfadeed iyo maalgelin tartan ayaa diyaar u ah cilmi-baarista ardayda shahaadada hoose.
Jaamacadda DePauw waa hormuud, jaamacad faneed heer qaran ah oo la aqoonsan yahay oo u heellan in ay wax barato in ka badan 1,600 oo karti sare leh, dhiirran, iyo arday kala duwan oo ka kala yimid waddanka oo dhan iyo adduunka oo dhan. Ku xidhan kuliyada fanka liberaaliga waa mid ka mid ah dugsiyadii muusiga ee ugu horeeyay qaranka. Muddo 185 sano ah, DePauw waxa uu abuuray jawi caqabad maskaxeed iyo ka qaybqaadasho bulsheed oo ardayda u diyaarisa guusha nolosha oo dhan. Waxay ku taal Greencastle, Indiana, oo qiyaastii 45-daqiiqo baabuur u jirta galbeedka Indianapolis, DePauw waa xubin ka mid ah Ururka Kulliyadaha Great Lakes. DePauw waxay leedahay go'aan joogto ah oo xagga kala duwanaanshaha ah waxayna raadinaysaa inay ku xoojiso machadkeena iyada oo loo marayo dhaqammo siman oo loo dhan yahay. Fadlan eeg profile-kan Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Jaamacadda DePauw
Musharixiinta waa inay soo gudbiyaan CV, warqad dabool, muunad ama manhaj la soo jeediyay, qoraalka qalin-jabinta, iyo magacyada iyo macluumaadka xiriirka ee seddex tixraac. Dhammaan agabka waa in lagu soo gudbiyaa Interfolio. Dib u eegista codsiyada waxay bilaaban doontaa Abriil 14, 2022. Fadlan la xiriir Rebecca Alexander [emailka waa la ilaaliyay] iyadoo wax su'aalo ah.
Kulliyadda Macallimiinta, Jaamacadda Columbia waxay raadisaa macallin waqti-buuxa ah oo diiradda saaraya Jinsiyadda, Xuquuqda Aadanaha, iyo Waxbarashada
Qaamuuskan barashada nabadda waxaa soo saaray Joanie Connors. Koorsooyinka Daraasaadka Nabadda ayaa caqabad ku ah ardayda lagu soo barbaariyay aragtiyo kooban oo adduunka ah iyo fikir sax ah ama qaldan. Qaamuus-bixiyayaashu waxay muhiim u yihiin ardayda asal ahaan kala duwan inay ku mid noqdaan isla bogga barashada maado kasta, laakiin waxaa si gaar ah loogu baahan yahay koorsooyin ka hor-imanaya fikirka taagan. Marka lagu daro daboolida shuruudaha guud ee la aqbalay ee nabada iyo xalinta khilaafaadka, qaamuuskan waxaa ka mid ah aragtida nidaamka iyo cilmiga dadka dhexdiisa. [sii wad akhriska…]
Jaamacadda Manchester waxay raadisaa Gladdys Muir Assistant Professor of Peace Studies
Barnaamijka Daraasaadka Nabadda ee Jaamacadda Manchester wuxuu ku martiqaadayaa codsadayaasha inay codsadaan booska Gladdys Muir Assistant Professor of Peace Studies. Tani waa waqti buuxa, booska kuliyadda ku-raadsiga. [sii wad akhriska…]
Waaxda Daraasaadka Waxbarashada iyo Barnaamijka Daraasaadka Nabadda iyo Khilaafaadka ee Jaamacadda DePauw waxay ku martiqaadayaan codsiyada jagada hal sano ah jagada kaaliyaha borofisar si ay u bilaabmaan Ogosto 2021. [sii wad akhriska…]